Wararka - Ka dib markii ay sii joogeen warshadaha silikooniga muddo dheer, macaamiil badan ayaa maqli doona su'aashan: alaabada silikoonta ee leh cabir isku mid ah ama xitaa qaab isku mid ah ayaa leh qiime kala duwan.
Ka dib markii ay sii joogaan warshadaha silikooniga muddo dheer, macaamiil badan ayaa maqli doona su'aashan: alaabada silikoon ee leh cabbir isku mid ah ama xitaa qaab isku mid ah waxay leeyihiin qiime kala duwan. Mawduucan, waxaa jiri jiray
Cabbaar baan murugooday. Si loo xalliyo dhibaatadan, marka lagu daro barashada kuwii ka horreeyay ee warshadaha, waxaan sidoo kale iibsaday badeecooyin silikoon ah oo leh qiimo kala duwan, soosaarayaasha, iyo gobollada isbarbardhig.
Maanta, waxaan ku siin doonaa sharaxaad fudud oo ku saabsan shirkadeena’alaabooyinka, iyagoo rajeynaya inay kaa caawiyaan inaad sii fahamto warshadaha wax soo saarka silikoonka.
1. Marka laga hadlayo agabka: Warshadaha qaaska ah qaarkood waxay leeyihiin shuruudo sifooyin gaar ah u leh alaabada silikoonka ah. Tusaale ahaan, qiimaha badeecadaha silikoonku ka samaysan yahay xabagta cimilada iyo alaabada caadiga ah ee silikoonku waa ka duwan yahay.
2. Cabbirka qaabdhismeedka: Qaar ka mid ah silica silica waxay u egyihiin bannaanka, laakiin cabbirka qaabdhismeedka gudaha wuu ka duwanaan karaa, qaabdhismeedkuna sidoo kale wuu ka dhib badan yahay, kaasoo saamayn ku yeelan doona wax soo saarka, haddaba qiimuhu ma isku mid.
3. Geedi socodka: Kala duwanaanta habka wax soo saarka ee alaabada silikoonku sidoo kale waxay saameyn ku yeelan doontaa qiimaha wax soo saarka. Sida daabacaadda xariirta, daabacaadda duubista, wareejinta kuleylka, iwm inta lagu jiro wax soo saarka
4. Qaab: Tirada godadka ku jira caaryada wax soo saarka ayaa saameyn ku yeelan doonta wax soo saarka. Kaliya marka macaamilka dalbado iyo tirada godadka ku jira caaryada ay gaaraan saami macquul ah, waa la yareyn karaa kharashaadka shaqada waxaana la horumarin karaa qiimaha waxtarka leh ee alaabada silikooniga ah.
5. Baahida: Isla badeecadan, tirada sii kordhaysa ee tirada u sii badanaysa, ayaa qiimaheedu aad u roon yahay.
Laga soo bilaabo kor, waxaa laga arki karaa in qiimaha alaabada silikoonku u egyahay aysan isku mid noqon doonin. Waxay la xiriirtaa alaabta ceyriinka ah ee la isticmaalay, cabirka qaabdhismeedka, tikniyoolajiyadda wax soo saarka, tirada godadka caaryada iyo tirada dalabka.
Sidaa darteed, waxaa lagu talinayaa in macaamiisha ay go'aamiyaan waxyaabahaan ka hor inta aysan habeynin sheyga, ka dibna ay la shaqeeyaan soo saaraha. Zhongsheng Silicone wuxuu soo dhaweynayaa dhammaan macaamiisha inay u yimaadaan si ay u habeeyaan, illaa inta aad u baahan tahay, marwalba waan joognaa.